eHimalaya Online || News from nepal » काजोल र शाहरुख खानलाई पति पत्नी मानेका यी वलिवूड अभिनेताले, जब शाहरुखको घरमा गौरी खानलाई देखे….
काजोल र शाहरुख खानलाई पति पत्नी मानेका यी वलिवूड अभिनेताले, जब शाहरुखको घरमा गौरी खानलाई देखे….
२०७८ भदौ १३ गते आईतबार ०१:२३
बलिउडमा केहि यस्ता स्टार जोडीहरु छन्, जसलाई हामी पति र पत्नी सम्झन्छौ, ती मध्ये १ स्टार जोडी शाहरुख खान र काजोल हुन्। उनीहरुको रसायन विज्ञान ठूलो पर्दा मा यति महान छ कि सबैले उनीहरुलाई एक वास्तविक जीवन को जोडी मान्छन्। उनीहरुको जोडी...
बलिउडमा केहि यस्ता स्टार जोडीहरु छन्, जसलाई हामी पति र पत्नी सम्झन्छौ, ती मध्ये १ स्टार जोडी शाहरुख खान र काजोल हुन्। उनीहरुको रसायन विज्ञान ठूलो पर्दा मा यति महान छ कि सबैले उनीहरुलाई एक वास्तविक जीवन को जोडी मान्छन्। उनीहरुको जोडी ठूलो पर्दा मा एक हिट छ र अझै पनी जनता को मनमा राज गर्दछन ।
उनीहरुको जोडी फिल्मी पर्दा मा धेरै मन पराइएको छ, धेरै पटक मानिसहरु शाहरुख र काजोल लाई पति पत्नी मान्ने गल्ती पनि गरेका छन्। आम मानिसहरु जस्तै, बलिउड को एक स्टार छ जो शाहरुख खान र काजोललाई पति र पत्नी मानेका थिए, जसको नाम वरुण धवन हो। वरुण धवन आफैंले यो कुरा खुलाएका थिए, आउनुहोस् पुरा कथा जानौं।
यो ध्यान दिन लायक छ कि शाहरुख खान र काजोल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, माई नेम इज खान, दिलवाले जस्ता फिल्ममा हिट दिएका छन्। यदि शाहरुख र काजोललाई कुनै फिल्ममा कास्ट गरिएको छ भने यो फिल्म हिट हुने निश्चित छ।
यो उल्लेखनीय छ कि बदलापुर अभिनेता वरुण धवन एक समय मा शाहरुख खान र काजोल लाई पति र पत्नी को रूप मा मान्दथे र यो वरुण धवन द्वारा एक रियालिटी शो मा बताइएको थियो। वरुण धवनले भने कि जब उनी शाहरुख खानको घरमा गए र गौरी खानलाई देखे उनी अचम्ममा परेका थिए ।
वास्तवमा वरुण धवन एक रियालिटी शो मा भाग लिन आएका थिए, जहाँ उनले बलिउडका किङ्ग शाहरुख खान र चुलबुली काजोलको बारेमा कुरा गरे। उनको बारेमा कुरा गर्दै, वरुण धवन भन्छन् कि उनी शाहरुख खान को घर NVA चन्दा संकलन गर्न आएका थिए, जहाँ उनकी पत्नी गौरी खानले ढोका खोलेकि थिईन उनी यो देखेर छक्क परे र त्यहाँ उभिएर उनीहरुलाई २ मिनेटसम्म हेरेको हेरै भएका थिए ।
उही वरुण धवन अझै बताउँछन् कि त्यो समय म एक चंदा लिएर घर फर्किए र यो सम्पुर्ण कुरा मेरी आमा संग साझा गरें। मैले मेरी आमालाई भने कि काजोल महोदय त्यहाँ हुनुहुन्न, जसमा वरुणकी आमाले जवाफ दिनुभयो कि काजोल शाहरुख खानकी पत्नी होइन, गौरी खान हुन्। काजोल र शाहरुख खान को केमिस्ट्री यति महान छ कि सबैले पति र पत्नी सम्झने गर्छन ।
प्रकाशित मिति २०७८ भदौ १३ गते आईतबार ०१:२३